Liverpool oo ku sii dhowaaneysa u dabbaaldegidda horyaalka Ingiriiska - Tilmaan Media
Liverpool ayaa tallaabo kale hore u qaadday taas oo ku sii dhoweneysa hanashada horyaalka oo aysan arag in muddo ah kaddib markii ay xalay guul ay u qalantay ka gaartay kooxda lagu neeynaaso Gorgorka Crystal Palace oo ay ku garaaceen 4-0.
Laad xor ah uu shabaqa Crystal Palace dhex dhigay Trent Alexander-Arnold ayaa Reds u horseeeday in ay qabato hoggaanka ciyaarta.
Laacibka reer Masar Maxamed Saalax ayaa isla qeybta hore ee cayaarta Liverpool u dhaliyay goolkii 2-aad gaar ahaan daqiiqaddii 44-aad.
Ciyaaryahan Fabinho oo isagu Maxamed Saalax ka caawiyey goolka 2-aad ayaa isna markiisa kubbad si awood ah uu u laaday shabaqa soo taabsiiyay daqiiqaddii 55-aad taasna natiijada ama hoggaanka cayaarta u sii dheereysay kooxda Jurgen Klopp uu leyliyo.
Goolka 4-aad waxaa Liverpool ugu soo xiray Sadio Mane sidaasna waxa ay ugu sii dhowaadeen hanashada horyaalka, kaliya caawa waxaa lawada sugayaa kulanka Man City ay ku wajaheyso Chelsea oo haddii Man City kulnankaasi laga adkaado Liverpool ay u dabbaaldegi doonto.
Khubarrada ka faallooda cayaaraha ayaa qaba in Reds ay mar walba ay hanatay horyaalka sanaadkaan maadaa ay ku hoggaamineyso naadiga booska 2-aad fadhida ee City dhibcoo ka badan 20 dhibcood.